निलिमा थापा मगरलाई नेपाल आइडल बनाऊ अभियान सुरू, को हुन निलिमा ? - Maxon Khabar
Home / News / निलिमा थापा मगरलाई नेपाल आइडल बनाऊ अभियान सुरू, को हुन निलिमा ?
निलिमा थापा मगरलाई नेपाल आइडल बनाऊ अभियान सुरू, को हुन निलिमा ?
पोखरा, १९ कात्तिक २०७५
AP1 टेभिको सिङ्गिङ रियालिटी शो नेपाल आइडलको दोस्रो संस्करण चलिरहेको छ । अघिल्लो बर्ष झै यसपाली पनि पोखराका प्रतिनिधि निलिमा थापा मगर र बिक्रम बराल टप ८ मा पर्न सफल भएका छन् ।
स्मरण रहोरस नेपाल अाईडलको पहिलो संस्करण भोटिङको अाधारमा पोखरा कै बुद्द लामाले जितेका थिए । तर यसपालि नियम केही परिमार्जन भएको हुदा निर्णायक र भोटिङको निर्णयको आधारमा नेपाल आइडल घोषणा हुनेछ । निलिमा थापा मगरलाई जिताउन गण्डकी प्रदेश पोखरामा सहयोग समिति गठन भएको छ ।
सोमबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरि सहयोग समितिको घोषणा गरिएको थियो । दोस्रो संस्करणको नेपाल आइडल निलिमा थापा मगर बनाऊ अभियान सहयोग समितिमा सहदेव जोजिजू (विनित) संयोजक रहेका छन् ।
भने सह-संयोजकमा रुद्र श्रीस मगर, महा सचिवमा प्रेम थापा मगर, सचिवमा सुरज थापामगर, कोषाध्यक्षमा मौसम थापा मगर, सह—कोषाध्यक्षमा सानु जोजिजू, सदस्यहरुमा शिव थापामगर, बलदिप पुनमगर, तारा थापामगर, इसारा थापामगर, भाइराज रानामगर, बेनु गुरुङ, रेनुका गुरुङ, उषा गुरुङ, विराज राउत, राजन नेपाली, इशानी दाठकुरी, महेन्द्र कुँवर, लक्ष्य रानामगर , रुपा थापा, सतिस केसी, राजु गुरुङ, हरिशचन्द्र बास्तोला रहेका छन् ।
समितिको सल्लाहकारहरुमा भने पदमराज ढकाल, सुनिल थापा, मनकुमार श्रेष्ठ, करण तामाङ, पूर्णबहादुर रानामगर, सन्तोष पिठाकोटेमगर, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, तिर्थराज पोखरेल, सुष्मा पौडेल, खिमा गुरुङ, रामभक्त जोजिजू, श्रीमान थुलुङ, विश्वराज बास्तोला, श्यामसुङ्ग तामाङ, शेरबहादुर गुरुङ, बुद्धराज बज्राचार्य, ताराबहादुर गुरुङ लगायत रहेका छन् ।
समितिले निलिमालाई जिताउन आवश्यक भब्य प्रचारप्रसार गरि भोटिङका लागि अपिल गर्ने छ । साथै बिक्रम बराललाई जिताउन पनि अर्को समिति गठन भएको थियो ।
#निलिमाको बारेमा थप जान्नुस :
२०५४ साल असार २९ गते भारतको सिलोङमा जन्मिएकी निलिमाको स्थायी घर भने बागलुङ जिल्लाको भकुण्डे हो । उनी हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं ११ फुलबारीमा परिवारसँगै बस्दछिन । परिवारमा आमा र दुई भाई छन् । पारिवारिक स्रोतका अनुसार निलिमाका बुबा भारतमा कामको शिलशिलामा गएका र उतै लापत्ता छन् ।
निलिमाले भारतको सिलोङमा कक्षा ३ सम्मको अध्ययन गरिन भने पोखरा आएर पोखरा एकेडेमीबाट प्रवेशिका परिक्षा उतीर्ण गरेकी हुन् । कालिका उच्च माविबाट कक्षा १२ उतीर्ण गरेकी निलिमाले पोखरा रानीपौवास्थित जोजिजू म्युजिक स्कुलबाट सांगीतिक प्रशिक्षण लिएकी हुन् ।
निलिमा यसअघि पश्मिाञ्चल गायन तारा—२०७४ मा बिजेता भईसकेकी छिन् । पोखराको विग एफएमले आयोजना गरेको बिग आइकनको सातौं संस्करणमा उत्कृष्ट ५ सम्म पर्न सफल भएकी निलिमाले नेपाल आइडल दोस्रो संस्करणको अडिसन पोखरा बाटै दिएका थिए । नेपाल अाईडल सिजन २को आइडलको उनि एकमात्र गोल्डेन माइक बिजेता महिला प्रतिस्पर्धी हुन् ।